SAWIRRO:- Hal Dollar Ayaa Arooskiisa ku Baxday! Sababta Ka Danbeysay Oo Cajiib Ah…!! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Guurka News SAWIRRO:- Hal Dollar Ayaa Arooskiisa ku Baxday! Sababta Ka Danbeysay Oo Cajiib Ah…!!
SAWIRRO:- Hal Dollar Ayaa Arooskiisa ku Baxday! Sababta Ka Danbeysay Oo Cajiib Ah…!!
Saturday, September 16, 2017 Bulshada , Guurka , News Edit
Bulsha:- Lammaane u dhashay dalka Kiiniya oo awoodi waayay inay aroos weyn samaystaan ayaa ku aqal galay lacag ay haysteen oo dhamayd $ 1 dollar oo keliya. Lamaanaha Wilson iyo xaaskiisa Anna Muture ayaa arooskooda laba goor dib u dhigay sanadkii 2016-kii si ay u helaan kharashkii arooska oo gaadhayay $ 300.
Sanadkan 2017-ka ayay goosteen inay iskaga aqal galaan wixii lacag ay haystaan oo dhamayd $ 1 dollar, taasi oo ay ku iibsadeen kaatunkii ay isu xidhi lahaayeen.
Waxaanay sheegeen in Guurku aanu ku xidhnayn lacag, laakiin uu yahay farxad adigu aad abuurayso.
Wilson oo ah wiil 27 sano jiray iyo gabadhiisa Ann oo iyana 24 sano jirtay ayaa soo xidhay dharkoodii caadiga ahaa iyadoo aanay samayn wax ka badan kaatuunkii ay isu xidheen, sidoo kale-na xafladda aanay dad badani ka soo qayb gelin.
Laakiin Markii laga sii daayay telefishinka ayay dad badani aad u soo caawiyeen iyagoo ku hambalyeeyay dhiiranaanta ay la yimaadeen lamaanahani iyo guriga ay geesnimada ku abuureen.
Wilson ayaa warbaahinta u sheegay inay dad badan oo walalkii oo ka weyni ku jiray arrinka la yaabeen laakiin isaga iyo xaaskiisu ay sidaasi go’aansadeen.
Wilson wuxuu ka ganacsadaa khudaarta.